सिरियन शरणार्थीको डायरीबाट | Hamro Patro
हामीले एकअर्कालाई हेर्यौं, कालो धुँवाले हाम्रो अनुहार नचिनिने भएको थियो र हामी गनाईरहेका थियौं । झरेको १० मिनेटमा मैले थोरै गोडा चलाउन सक्ने भएं, पिसाब फेर्न सकें । लगाएका कपडालाई उल्टाएर लायौं ताकि थोरै भएपनि सफा देखिन्छ कि भनेंर ।
सिरियाबाट भागेर टर्की आइपुगेका ३ जना शरणार्थीहरु लुकी लुकी ग्रीस सम्म पुगेका छन् । अन्तमा जीवन धान्न अनि परिवार जोगाउन उनीहरु भविष्यको खोजिमा ईटाली जाने निर्णयमा पुग्दछन् । बिना कागजपत्र यो यात्रा त्यति सजिलो छैन, आउनुहोस् नेपाली संस्करणमा प्रस्तुत छ, समुन्द्र पारीको शरणार्थीका दर्दनाक कथा । ट्याकंर भित्रका २४ घण्टा ।
हामीलाई थाहा थियो कि ट्याकंरभित्रको यात्रा ज्यान लिन सक्ने थियो, अरु सिरियनहरु पनि थिए जसले आफ्नो अनुभवका आधारमा हामीलाई त्यसो नगर्न भने । तर हामीलाई जसरी पनि ग्रीस कट्नु थियो । साथी (अनस अनि बेदी) संगै म पनि २ महिनादेखि ग्रीसमा बिना कागजात लुकीछिपी बस्दै आएको थिए । केही काम थिएन, खाना थिएन, बाँच्ने आधार थिएन अनि प्रहरीहरुले बहुतै बर्बरतापूर्वक हामीलाई व्यवहार गर्दथे । मानव ओसार पोसार गर्नेहरु प्राय कुर्दिश या अरबीहरु खुल्ला क्याफेमा बसेर मान्छेलाई सामान झैं ओसार्ने कुरा गर्दछन्, प्लेन, पानीजहाज या ट्याकंर भित्र ।ट्याकंरको यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ, मलाई थाहा थियो । तर यो ईटाली भित्र छिर्ने र नयाँ जीवनको एउटा अचुक माध्यम थियो । हुन सक्छ कि ट्याकंरभित्रका मान्छे गन्तव्यमा पुग्दासम्म लास बनि सक्नेछन् ? तर विकल्प अरु के नै छ र ?
एकजना साईबर क्याफेका मालिक ईजिप्षीयनले ट्याकंरको उपाय हामीलाई भनेका हुन् । उसका क्याफेमा धेरै अरबी बालबालिकाहरु आफ्ना आमाबुवासंग स्काईपमा कुरा गर्न आउने गर्दथे, ५००० युरो दिएमा ग्रीक ड्राईभरले हामीलाई ईटालीको मिलान शहरसम्म पूर्याउने कुरा उनले बताए ।
हामीले एथेन्स बिहान सवेरै ट्याक्सीमा छाड्यौं, म मेरा दुई साथी र एकजना नचिन्ने ईराकी हामीसंग थियो । समुन्द्र किनारको एउटा गोदाम जस्तो एकलास ठाँउमा हामीलाई लगियो, त्यसपछि गोदामको ठुलो ढोका लगाएर ड्राईभरले बन्दोबस्त मिलाउन थाल्यो । हामीलाई सर्वप्रथम शौचलय जान भनियो, अरु साथीहरु गए शौचालय तर म धेरै तनावमा थिए, शौचालय जान सकिन । गाडीको एक्सल तर्फको सानो व्वालबाट हामीलाई छिर्न भनियो, मलाई लाग्यो कि अब हामी तीनै जना त्यही मर्दैछौं भनेर ।
घस्रदै छिर्न पर्ने थियो । छिर्न अघि हामी चारैजनाले प्रार्थना गर्यौं, हाम्रा परिवार अनि बालबच्चाका लागि, सायद अब उनीहरुसंग कहिल्यै भेट हुने छैन, मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो । संगैको साथी अनस आफ्ना छोराछोरी सम्झेर अचम्मको चित्कार गर्न थाल्यो, मैले यसखाले मानवीय संवेदना प्रथम पटक देखें, धेरै नराम्रो लाग्यो आफ्नै अवस्था देखेर । त्यस ट्याकंरको सानो दुलोमा चार जना अट्न असंभव थियो, हामी तीनजना जाने भयौं र ईराकी साथी चाँही फर्कियो । अटेको भए उ पनि जान्थ्यो होला ?
ड्राईभरले ५००० युरो लियो र हामी ईटाली पुग्दा सम्म मरिसकेको भएमा हाम्रो शरीर झिकेर फाल्नका लागि भनेर पनि थप ५०० युरो लियो । गाडी चलेको आधा घण्टा भयो, अब मलाई भयले पनि हुनसक्छ जोडले पिसाब च्याप्यो तर तीनै जना यसरी चेप्टीएर बसेका थियौं कि हामी हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौं । चारैतिर कालो थियो, हामीलाई कालो केही कुराले छोपिएको थियो अनि भुईमा रबरको केही म्याट जस्तो थियो । डिजेल अनि प्लास्टिकको जलेको गन्ध आईरहेको थियो र तापका कारणले म्याट पग्लन थालेको थियो । हामी त्यहाँ मर्दैछौं, म अब मर्नका लागि तयार थिए ।
मेरा २ साथीले हामीसंग भएको पेप्सीको सानो बोतलमा पिसाब गरे जुन आधा बोतलमा पर्यो अनि आधा यत्रतत्र पोखियो । बोतलको पिसाब बाहिर फाल्दा पनि तिब्र रफ्तारको हावाले पिशाबका छिटाहरु हामीतर्फ नै फल्यो ।
युरपियन युनियनका देशहरुमा यी शरणार्थीहरु जान्छन् । मुख्यतया ग्रीस र ईटालीमा राम्रो सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका अवसरले उनीहरु त्यहाँ लुकीछिपी जानेगर्दछन् । असाईलम खोज्नेहरुलाई वेलायत, जर्मन अनि नेदरल्याण्ड लगायतका देश अनि केही स्क्यान्डेनिभियन स्टेटहरुले केही प्रावधान दिएका छन् । व्यवसायिक मानव तस्करहरु युरोप भरि, मध्यपूर्वी एसिया अनि उत्तर अफ्रिकासम्म सक्रिय छन्, कतिले त आफ्ना सेवाहरु फेसबुकमा प्रवर्धन पनि गर्ने गर्दछन् । शरणार्थीहरु आफ्नो वर्षौको कमाई, सरसापटी अनि जेथा बेचेका रकमहरु यिनै तस्करहरुलाई दिन बाध्य हुन्छन् ।
लगभग यात्राको अन्त तर्फ हामी तीनैजना पीडाले मरणासन्न भएर छटपटाइरहेका थियौं । केही समयमा ट्याकंर अब पानी माथिको फेरीमा थियो, बन्द ईन्जिनमा हाम्रो श्वासप्रश्वासको आवाज पनि गर्जन भएझै लाग्न थाल्यो । हामीलाई चुपचाप भएर गन्तव्य पुग्नु थियो, हामी चुप बसिरह्यौं तर पीडाका कारणले त्यो चुप बस्नु लगभग मरेकै जस्तो थियो । हामी श्वास फेर्न संघर्ष गर्दै थियौं ।
हातको मोबाईलमा परिवारका फोटाहरु हेरेर शायद म जीवनको अन्तिम पलहरु गुजारीरहेको छु जस्तो भान भयो । मेरा दुईजा जुम्ल्याहा छोरीहरु छन्, डिमा र रिमा । तिनीहरु चार बर्षका छन्, मैले यो यात्रा उनीहरुकै भविष्यका लागि गरिरहेको थिएं । मैले सोचें उनीहरुले के खान्छन् अनि के गर्छन यदि म ईटाली पुगेर कमाउन सकिन भनें भनेंर । मैले देश छाड्ने बेलामा मेरी श्रीमती गर्भवती थिइन र टर्कीमा अल्ट्रासाउण्ड गर्दा मैले छोरी नै भएको थाहा पाएको हुँ । म यस्तै केही सोच्दै थिएं, मोबाईलको ब्याट्री सकियो ।
अब फेरीबाट झरेर ट्याकंर पुनः गुड्न थाल्यो, बाहिरका मान्छेहरुले बोलेका भाषाका आधारमा हामी अब ईटाली पुग्यौं भन्ने थाहा भयो । अब जेसुकै भएपनि हामीलाई ग्रीस फर्काउने छैनन्, हामी खुशी भयौं । शरीर अर्धमृत भइसकेको थियो, अब ड्राइभरले सुनेर रोकोस् भनेर हामीले कराएर ट्याकंरको भुईमा ठोक्न थाल्यौं । ड्राइभरले सुनेन, साथीको मोबाइलमा बाँकी ब्याट्रीको प्रयोगले ग्रीसमा भएको तस्करलाई फोन गरेर ड्राइभरलाई गाडी रोक्न लगाउ नत्र हामी मर्न आट्यौं भन्यौं । केहीबेरमा गाडी जगंल बीचमा रोकियो, घस्रेर हामी झर्दा हाम्रा गोडाहरु नफैलने गरि खुम्चीएका थिए । शरीरको तल्लो भागमा केही थाहा हुन सक्ने संवेदनशीलता थिएन ।
ड्राइभरले अब हामी मध्ये कसैलाई चिन्दिन र आफूलाई पनि कसैले चिनेको छैन भनेर कडा शव्दमा भनें । हामीले एकअर्कालाई हेर्यौं, कालो धुँवाले हाम्रो अनुहार नचिनिने भएको थियो र हामी गनाईरहेका थियौं । झरेको १० मिनेटमा मैले थोरै गोडा चलाउन सक्ने भएं, पिसाब फेर्न सकें । लगाएका कपडालाई उल्टाएर लायौं ताकि थोरै भएपनि सफा देखिन्छ कि भनेंर । हामी कहाँ थियौं थाहा थिएन , हामी हिड्दै अघि गयौं, अगुंरका लहराहरु र खेतहरु थिए। गाँउलेहरुले हामीलाई देखेर ग्रीसमा जस्तो प्रहरीलाई खबर गरिदेलान् भन्ने भय पनि थियो । मलाई थोरै अँग्रेजी आउँछ, मैले गाँउलेहरुसंग कुरा गरें । हामीले २४ घण्टा देखि केही खाएका र पिएका थिएनौं । ईटालीका मान्छेहरु दयालु रहेछन् , उनीहरुले हाम्रो ढाड थपथपाए अनि खान पनि दिए । धुँवा जस्तै कालो कफि दिए, हामी धुँवाको कालो सम्झदैं कफि पिउन थाल्यौं, थाकेका थियौं तर हर्ष थियो । हाम्रो नयाँ जूनी ।
यस वास्तविक कथा सिरियन नागरीक साईदले भनेका हुन् । उनले यस कथा बीबीसी वल्र्डका कर्मचारीडानियल सिल्वास एडाम्सन र म्यादमख एकबिक लाई भनेका हुन् । यस आलेखमा भएको फोटोमा तिनै साईद आफ्ना दुई जुम्ल्याहा छोरी र नयाँ छोरीका साथमा देखिन्छन् ।
अहिले सिरियाका घटनाक्रम अनि त्यहाँका बालबालिकाका अवस्थाहरु बारे समग्र विश्वमै आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल लगायत मीडियाहरुमा पनि सिरियाका कुराहरु छन् । यस्ता धेरै पिताहरु छो्रीहरुको भविष्का लागि सिरियाबाट अन्य देश जोखिम मोलेर पुगेका छन् । यस डायरीका कथा आजलाई यति नै, अर्को जिवन्त अनि यथार्थ कथा लिएर फेरि आउनेछौं ।